Siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo geggessuuu fi gochaa diiggaa biyyaattii bobba’uu dabalatee – yakkawwan adda addaatiin himatamanii kanneen adabbaain hidhaa itti muramee fi yeroo adabbii isaanii isaanii fixatanii ba’an, biyyattii keessatti, xalayaa yakka irraa walaba ta’uu keenya mirkaneessu dhorkamuu keenyaa irraa kan ka’e, hojiitti miindessamuu yokaan qacaramuu hin dandeenye – jechuun himatu.
“waggaoota hedduudhaaf mana-hidhaa turree, adabbii keenya fixannee baane iyyuu, yeroo hojiidhaaf dorgomne arganne, ragaalee akka ashaaraa fi ka biroo akka dhiheeffannu nu gaafatu. Yeroo ragaa sana fudhachuuf waajjira qorannaa foorensikii yeroo deemnee gaafannu, ashaaraan keessatti yakkatti waan qabamee jiruuf, mana-murtii irraa xalayaa fiduu qabdan, nuun jedhu.
Manni-murtii ammoo, haga waggaa murtaa’eetti gurmaa hawaasummaa siyaasatti hidhata qabutti hirmaachuu irraa ugguramtanii jirtan. Hojii kan sin dhorke hin jiru. Xalayaa isiniif barreesinus hin qabnu” jechuun nu deebisu. Sababaa kanaaf, otuu barnootaa fi dandeettii gahaa qabnii jireenya hoji-dhablummaa fi rakkinaaaf saaxilamuu isaanii dubbatu.
Balaa Dhaqqabeen Namnii 22 Ajjefamuu Polisoonni Ibsanii Jiru